Urethritis - isifo lalivamile futhi singathandeki kakhulu, okuyinto eyenzeka ngaphansi kwethonya izinto ezihlukahlukene, futhi kuhambisana ukuvuvukala izicubu we urethra. Lesi sifo kuhambisana nezinhlungu ezinzima kanti ukushiswa ngokungabi bikho ukwelashwa ngokuvamile kuba amahlala khona. Yingakho kubalulekile ukwazi ukuthi izimpawu urethritis kwabesifazane. Phela, ngokushesha isiguli bazonikezwa nosizo, inqubo yokwelapha kuyokwenzeka kalula.
Urethritis kwabesifazane nezimbangela zayo
Ngaphambi ufunde indlela ibukeke main izimpawu of urethritis kwabesifazane, kubalulekile ukuba bajwayelane ezivamile ezibangela le ngozi. Ikakhulu, i-ukuvuvukala urethra uvame kubangelwa amagciwane angabonakali. nezilwanyana ezincane Pathogenic Ungafaka ngqo ohlelweni genitourinary. Kodwa, ngaphezu, ukubaluleka kanye isimo izivikeli mzimba, njengoba urethritis kungenzeka kubangelwa ukusebenza amagciwane ezingosomathuba. Nazi zezimbangela ezivamile zokugula:
izifo ezithathelwana ngocansi,
ukuphazamiseka ukwakheka evamile microflora lwesitho sangasese sowesifazane, kuhlanganise nalezo okudalwe ukusebenzisa isikhathi eside ngokwanele kwemithi elwa namagciwane;
ekuqaleni umsebenzi wocansi;
overcooling kwezitho okhalo;
ukuphazamiseka kwama-hormone, kuhlanganise nalezo ezenzeka zixhumana nabantu lapho ukhulelwe;
ukudla okungenamsoco, ngenxa yokuswela amavithamini namaminerali ekudleni;
ukucindezeleka njalo kanye uhlobo sezinzwa.
Izimpawu urethritis kwabesifazane
Ngesikhathi ubulili fair leso sifo kuhambisana izimpawu kakhulu kunangonyaka amadoda - ngezinye izikhathi urethritis futhi bonke asymptomatic, okuyinto inkimbinkimbi inqubo yokuthola ngokuvamile kuholela ukuthuthukiswa amafomu njalo lesi sifo. Noma kunjalo, kuwufanele ukunaka ezinye semfene:
njalo esivuthayo ukuzwa ku urethra, nezinhlungu ezinzima kanti kabuhlungu ngesikhathi ukuchama, futhi nesifiso sokufuna njalo ukuba athululele esinyeni - main izimpawu of urethritis kwabesifazane ;
Kungaphinde kufake ububomvu kanye ukuvuvukala Izitho zangasese zangaphandle;
Kwezinye izimo, kukhona ubovu osenyameni evela urethra, kodwa abesifazane, lokhu uphawu likhona kuyinto ayeyivelakancane;
ubuhlungu uba kakhulu okukhulu ngaphezulu ngesikhathi sokuya ocansini noma ngokushesha ngemva kwalokho;
urethritis okungalapheki abesifazane kungenzeka ukuthi umataniswe nge yansukuzonke ubuhlungu besisu engaqinile;
Ngezinye izikhathi iziguli esekhala ukulunywa we ngemomozi, okuyinto iyakhula esesikhathini;
kuyafaneleka ukuthi ukuvuvukala kule urethra ngokuvamile kube nzima cystitis.
Urethritis kwabesifazane: imithi, izidakamizwa
Ngokushesha kufanele kuphawulwe ukuthi izidakamizwa umthamo akhethiwe ngamunye, ngakho akufanele self-medicate. Ukuqeda asetshenziswa urethritis imithi elwa namagciwane, okuyinto kakhulu ngokuphumelelayo nesifo. Ngaphezu kwalokho, kusetshenziswa suppositories sowesifazane sangasese kuthiwa, izicelo zendawo licindezele, has analgesic, anti-inflammatory futhi elwa namagciwane umphumela. Yezokuhwebelana kanye yokwamukela immunomodulators njengoba ukusebenza izivikeli mzimba kuyasiza kakhulu maningi amathuba ukuqeda lesi sifo kwabanye.
Izifo ngokuhlanganyela hip. Ngezimpawu zesifo hip
Lesizalo fibroids ngesikhathi menopause: izimpawu kanye nokwelashwa. Izindlela ukwelapha lesizalo fibroids
Skin Izifo - mollusk Kuyathathelena
Uketshezi ukhalo ludinga ukunakwa!
Izinsuku evundile - kuyini?
Ikhekhe elivela kubhisikidi: zokupheka zokupheka, ama-toppings. Indlela yokupheka ibhisikidi elimnandi
Router Hambayo "Iota": incazelo, izici, ukumisa, kanye nokubuyekeza of the abanikazi
Kerch: Ferry Ferry
Crank nezinhloko: incazelo, izici, izinhlobo
Bonisa indodana yakho ukuthi ungenza kanjani ithangi lamaplastiki
Nokwelashwa kwezinkinga isithende iqhubezela ekhaya
"Yohlobo lweToyota Corolla" - isizukulwane-11 hatchback